इटाली र स्पेनपछि फ्रान्समा पनि भयावह बन्दै कोरोना, कहाँ कतिको मृत्यु ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
इटाली र स्पेनपछि फ्रान्समा पनि भयावह बन्दै कोरोना, कहाँ कतिको मृत्यु ? (सूचीसहित)
काठमाडौंः इटाली, स्पेनपछि फ्रान्समा पनि कोरोना भाइरस (कोचिड–१९) भयावह बन्दै गएको छ । इटाली, स्पेनपछि फ्रान्समा पनि कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
मंगलबार मात्रै इटलीमा ८ सय ३७ को मृत्यु भएको छ भने ४ हजार ५३ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस कोरोना लागेर निको भएका भन्छन्ः ‘सकभर हुन नदिऊ, भए आत्मबल बढाऊँ’
योसँगै त्यहाँ कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १२ हजार ४ सय २८ पुगेको छ भने संक्रमित संख्या एक लाख नाघेको छ ।
स्पेनमा मंगलबार कोरोनाका कारण ७ सय ४८ को मृत्यु हुँदा करिब ८ हजार संक्रमित फेला परे ।
त्यहाँ हालसम्म ८ हजार ४ सय ६४ को मृत्यु भएको छ भने ९६ हजार संक्रमित भएका छन् ।
इटाली र स्पेनपछि फ्रान्समा पनि कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गइरहेको तथ्याङकले देखाएको छ । त्यहाँ मंगलबार ४ सय ९९ जनाको मृत्यु भएको छ, ७ हजार ५ सय ७८ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।
त्यसँगै फ्रान्समा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३५ सय २३ जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ५२ हजार १ सय २८ पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस कोरोना फैलाएको भन्दै कनिकालाई प्रहरीको पुर्जी
कहाँ कतिको मृत्यु ? हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः